Nehemia Resan Ato Yerusalem Afasu No | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Momma yɛnkɔ yɛn akyi kakra nkɔhwɛ nea ɛyɛe a wosii Yerusalem afasu no. Nehemia yɛ Israelni, na na ɔyɛ Ɔhene Artasasta akoa. Ná ɔte Persiafo kurow Susan mu. Nehemia nuabarima fii Yuda bɛkaa awerɛhosɛm bi kyerɛɛ no. Ɔbɛkaa sɛ: ‘Nkurɔfo a wɔsan baa Yerusalem no, wonni ahobammɔ. Kurow no afasu ne apon a Babilonfo bubui no, besi nnɛ obiara nsii.’ Asɛm no haw Nehemia. Ná Nehemia pɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem kɔboa. Enti ɔbɔɔ mpae sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhene no bɛma no akɔ.
Akyiri yi, ɔhene no huu sɛ Nehemia anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ. Ɔhene no bisaa no sɛ: ‘Minhuu wo sei da. Ɛyɛ asɛm bɛn?’ Nehemia kaa sɛ: ‘Me kurom Yerusalem asɛe, adɛn nti na m’anim renyɛ mmɔbɔmmɔbɔ?’ Ɔhene no bisaa no sɛ: ‘Dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo?’ Ntɛm ara na Nehemia bɔɔ mpae wɔ ne tirim. Afei ɔkaa sɛ: ‘Mesrɛ wo, ma menkɔ Yerusalem nsan nkosi afasu no.’ Ɔhene Artasasta ka kyerɛɛ Nehemia sɛ obetumi akɔ. Ɔhene no yɛɛ nhyehyɛe maa no, sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi atwa kwantenten no akodu asomdwoe mu. Afei, ɔmaa Nehemia yɛɛ Yuda man no so amrado. Ɔmaa no nnua a ɔde bɛyɛ kurow no apon nso.
Bere a Nehemia duu Yerusalem no, ɔkɔhwɛɛ kurow no afasu no. Afei ɔboaboaa asɔfo ne mpanyimfo no ano, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Yɛn asɛm ayɛ mmɔbɔ. Ɛsɛ sɛ yesiesie ha.’ Nkurɔfo no penee so, na wofii ase sɛ wɔresan asi afasu no.
Nanso, Israelfo no atamfo binom serew wɔn. Wɔkaa sɛ: ‘Wuram kraman mpo betumi abubu ɔfasu a moresi yi.’ Adwumayɛfo no amma nsɛm a wɔn atamfo kae no ammu wɔn abam. Wɔkɔɔ so yɛɛ adwuma no. Ɔfasu no kɔɔ soro, na ɛyɛɛ den.
Atamfo no yɛɛ wɔn adwene sɛ, wɔbɛfa akwan horow so aba Yerusalemfo no so prɛko pɛ. Bere a Yudafo no tee nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ no, wɔn koma tui. Nanso Nehemia kaa sɛ: ‘Munnsuro, Yehowa ka yɛn ho.’ Ɔmaa awɛmfo bɔɔ adwumayɛfo no ho ban. Enti atamfo no antumi ammɛtow anhyɛ wɔn so.
Nna 52 pɛ no, wɔtoo afasu no wiei, na wosisii apon no nso. Nehemia de Lewifo no nyinaa baa Yerusalem sɛ wɔrebehyira afasu no so. Ɔhyehyɛɛ wɔn yɛɛ wɔn nnwontofo akuw mmienu. Wɔforoo atrapoe anaa stɛps a ɛwɔ Nsuaniwa Pon no ho kɔɔ ɔfasu no atifi. Nnwontofo kuw no baako de wɔn ani kyerɛɛ nifa, baako nso de wɔn ani kyerɛɛ benkum. Wɔnantew faa kurow no ho hyiae. Wɔhyɛn ntorobɛnto, wɔbɔɔ nnawuta ne asanku de too nnwom maa Yehowa. Esra ne nnwontofo kuw baako kɔe, na Nehemia nso ne baako kɔe. Wɔnantewee ara kosii sɛ wohyiaa wɔ asɔrefie hɔ. Nnipa a wɔwɔ Yerusalem no nyinaa bɔɔ afɔre maa Yehowa, na wogyee wɔn ani. Mmarima, mmaa, ne mmofra nyinaa gyee wɔn ani. Nnipa a wɔwɔ akyirikyiri no mpo tee nnwom a na wɔde anigye reto no.
“Akode biara a wɔbɛyɛ de aba wo so no renyɛ yiye.”​—Yesaia 54:17
Nsɛmmisa: Dɛn nti na Nehemia kɔɔ Yerusalem? Nna dodow sɛn na wɔde sii Yerusalem afasu no wiei?
Nehemia Nhoma no Nnianim Nsɛm
Nneɛma pii wɔ Nehemia nhoma no mu a Onyankopɔn asomfo betumi asua nnɛ.